Syria: Maraykanka oo Diyaarad kasoo riday militariga Bashar Al Assad • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Syria: Maraykanka oo Diyaarad kasoo riday militariga Bashar Al Assad
Syria: Maraykanka oo Diyaarad kasoo riday militariga Bashar Al Assad
Militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey in mid kamid ah diyaaradaha dagaalka Maraykanka ay soo riday diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee dowlada Bashar Al Assad ee Siiriya.
Diyaarada laga soo riday Bashar Al Assad maalinimadii shalay oo Axad ahayd ayaa kusoo beegantay xili ay dagaalo culus ka bilowdeen nawaaxiga magaalada Raqqa oo saldhig u ah Daacishta Siiriya.
Maraykanka ayaa ku eedeeyey diyaaradan dowlada Siiriya inay duqeysay nawaaxiga saldhigyada xoogaga Kurdida iyo Sunnida ee uu Maraykanka u hubeeyey inay la dagaalamaan kooxda Daacish, kuwaasi oo hada ku hareeraysan magaalada Raqqa.
Ciidamada dowlada Siiriya ee Bashar Al Assad ayaa iyaguna wada dhaq dhaqaaq ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Raqqa taasi oo keenaysa iska horimaad ay la galaan ciidamada kale ee taageerada ka hela Maraykanka.
Xukuumada Siiriya ayaa xaqiijisay in laga soo riday diyaarad ay sheegeen in ay duqen ku waday xarumaha kooxda Daacish ee Raqqa, isla markaana duuliyihii waday aan illaa iyo hada la helin meel uu ku danbeeyey.